कता हराए पप गीत ? – Todaypokhara
कता हराए पप गीत ?
मनोज घर्तीमगर-पप गीतको राजधानीको रुपमा चिनिएको पोखरामा पछिल्लो समय पप गीत नै हराएको छ । ५० को दशकतिर पोखरामा हरेक हप्ता नयाँनयाँ पप गीत रेकर्ड हुन्थे । लोकपप स्वादमा गाइएका ती गीत सुन्नलाई स्रोताहरु क्यासेट पसल चहार्थे । विभिन्न पप ब्यान्डले हरेक साता सांगीतिक कार्यक्रम गर्थे । ‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा हुस्सु र कुहिरोले’, ‘जोमसोमै बजार’जस्ता नेपथ्य ब्यान्डका पप गीतले बजार पिटेको बेला थियो । रेडियो र टेलिभिजनमा पोखरेली गायक तथा ब्यान्डका गीतको चर्चा हुन्थ्यो । अचेल पोखराले पप गीत गाउनै छाडेको छ । केही वर्षयता पोखरामा बजार पिट्ने पप गीत आउनै सकेको छैन ।
ब्यान्डहरुको चहलपहल सुनसान हुनुुले पनि पप गीतका एल्बम नआएका हुन् । भएका कलकार र गायकले पलायनको बाटो रोजे । पोखराका एकताका ब्यान्डहरु खुल्ने क्रम फेसनजस्तै थियो । पप गीतले पनि खुब चर्चा पाएका थिए । अहिले ती ब्यान्डहरु कता हराए, कसैलाई थाहा छैन । खुलेका झन्डै ७५ बढी ब्यान्डहरु निष्क्रिय भएपछि पप गीतको नामोनिसान मेटिएको हो । ‘राम्रा सिंगर पलायन हुनुले पप गीतमा ग्याप रह्यो,’ लेकाली ब्यान्डका मुख्य भोकलिस्ट विनोद बानिया भन्छन्, ‘अर्को कुरा पप गीतभन्दा दोहोरी, आधुनिक र सुगम संगीतका गीत हाबी भए । त्यसैले ५० को दशकजस्तो पोखराको पप गीत माथि उठ्न सकेन ।’ बानियाको भनाइमा पप गीत त निस्केका छन् तर अन्य गीतका तुलनामा निकै कम छन् । त्यसैले पनि देखिन छाडेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘पप गीतको साधना गर्ने र निरन्तर लाग्नेहरु कम हुँदै गएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’
पप संगीतलाई व्यवसाय बनाउँदै आएका कलाकारका एल्बम बिक्री हुन छाडे । नयाँ प्रविधिले एल्बम निकाल्न पनि महङ्गो हुन थाल्यो । पप एल्बमको लगानी नै नउठेपछि कलाकारले जोखिम मोल्न नचाहेका हुन् । लगानी खेर जाने भएपछि पप गायकहरुले एल्बम निकाल्न छाडेको धेरैको भनाइ छ । ‘गीत निकाल्न मार्केट स्टडी गरिरहेका छौँ । धेरैले आफ्नो लगानी डुबाउन चाहँदैन । त्यही भएर पप गीत नदेखिएका हुन्,’ डिमर्चा ब्यान्डका मुख्य गायक भाष्करध्वज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाएरै जीवन धान्न नसकिने भएपछि धेरै गायक पनि पलायन भए । देशको सांगीतिक माहोल पनि ठीक छैन, त्यसको असर पनि हो ।’
त्यसो त यतिबेला कुनै पनि गीति एल्बमको बजार राम्रो छैन । लोकदोहोरी एल्बमले बजार खाएको छ । अलिअलि भए पनि दर्शक, श्रोता दोहारी गीत नै सुन्छन् । एकातिर एल्बमको लगानी पनि उठ्दैन भने अर्कोतिर पाइरेसीले हैरान बनाएको छ । अहिले सुन्ने गीतभन्दा बढी हेर्ने गीत बनाउने ट्रेन्ड छ । नाम र दामका लागि काम गर्ने हो भने भिजुअल गर्नैप¥यो । यसले खर्च अझ धेरै बढाउँछ । ‘नामले मात्रै पुग्दोरहेनछ, कलाकारलाई बाँच्न आम्दानी चाहिन्छ, एल्बम बिक्री हुँदैन अनि कसरी निकाल्ने ?’ २०४७ सालदेखि भ्यागबोन ब्यान्डमा लागि परेका गायक श्यामसुङ तामाङ भन्छन्, ‘त्यही भएर पप गीतका एल्बम आउनै छाडे, कलाकारले पनि अन्य व्यवसाय रोजे ।’
पोखराको बार डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा एकताका संगीतकार एवं कन्दरा ब्यान्डका सदस्य बुद्धराज बज्राचार्यले दैनिक तीन वटासम्म पप गीत रेकर्ड गर्थे । अहिले ती दिन कहाँ गए होलान् भन्ने उनी गम खाँदैछन् । उनले भने, ‘त्यसको ठाउँ अन्य गीतसंगीतले लिएका छन् । राम्रा पप गायकले एल्बम निकाल्नै छाडे । यहाँ भएका ब्यान्डका सदस्य पनि अन्य व्यवसायमा लागेका छन् । पप गीतका एल्बम नै बिक्री हुँदैनन् अनि कसले गीत रेकर्ड गर्छ ?’
पोखरामा गीत रेकर्डिङ गर्ने र एल्बम ल्याउने पहिलो ब्यान्ड योङ टाइगर थियो । यस ब्यान्डले ‘एक्लो जीवन’ नामक एल्बम बजारमा ल्याएर यहाँ पप गीतको मानक बनाएको थियो तर अहिले यस ब्यान्डका सदस्य कता छन् कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । लोक पप संगीतमा पोखराले निकै ठूलो योगदान दिन सफल भए पनि अहिले यसै विधामा यो सहर सुनसान छ । पोखरामा कन्दरा, देउराली, ब्रोसिस, डि मर्चा, मध्याह्न, नमस्ते, परिवेश, लेकाली, रियाज, भ्यागबोन, सिजन, द एज, त्रिवेणी, सृष्टि, द निजर, योङ टाइगर, पिस ह्याङ्की, हाइवे गाइज, जिरोसिक्स वान, माइलस्टोन, भाइबेक्स, अन्नपूर्ण, पछ्यौरी, नमस्ते, मोक्ष, तन्त्र, पखेरी, द संस्कार, इसाबेला, त्रिवेणी, मारुनी, पञ्चासे, रियाज, मंगोल्स, एजु लगायका ब्यान्डहरुले कुनै पनि एल्बम निकाल्न सकेका छैनन् । यहाँ अन्य ससना थुप्रै ब्यान्डहरु पनि छन् । तिनले पनि एल्बम र पप गीत बजारमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
सोलो पप गायक धमेन्द्र सेवाङ, उज्ज्वल भण्डारी, सुन्दर थापा, नरजंग गुरुङ, अनिल केसी, मनोज गुरुङ, सर्वज्ञमान शाक्य, सन्तोष कोन्मे, दीपराज थापा, एनजे सागर शाह, विवेक केसी, सिद्धार्थ पौडेल, अरबिन तुलाचन, ईश्वर दियाली, अपार गुरुङ लगायतले पनि एक दुई गीत रेकर्ड गराए पनि एल्बम निकाल्न सकेका छैनन् । अहिले त पुराना लोकपप फ्लेबरमा गति गाउने गायक कन्दराका विवेक श्रेष्ठ, मध्याह्नकका कर्णदासहरु पोखरामै छन् ।
पचासको दशममा संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै मुस्किल थियो । गीत रेकर्ड गर्न लाइन लाग्नुपथ्र्यो त्यो पनि काठमाडौंका स्टुडियोमा । एल्बम निकाल्नदेखि प्रमोसन गर्न लगायतका सबै काम काठमाडौंबाटै हुन्थे । अहिले सबै कुरा पोखरामै गर्न मिल्छ । तैपनि पप गीतको पोखरेली तुजुकलाई कायमै राख्ने सकेका छैनन् कलाकारले । संगीत क्षेत्रमा भविष्य नदेखेर पलायन हुनेका सूची पनि लामै छ । त्यही भएर पनि पप गीतमा खडेरी लागेको हो । पोखरामा पप गीतको खडेरी लागे पनि पप गायकहरु यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘मेरो प्रसङ्गमा नयाँ लोक पप रेकर्ड भइसकेको छ,’ भर्खर बिर्सुं भन्छु तिमीलाई झन्झन् तिम्रो याद आउँछ बोलको गीत रेकर्ड गरेका पुराना लोक पप गायक एनजे सागर शाह भन्छन्, ‘भिडियो पनि केही समयमै आउँछ । पहिला पो दुई तीन लाखकै गीत बिक्री हुन्थे । अहिले त केही आउँदैन । त्यसैले पनि पप गीत हराएका हुन् । पोखरामा लोकपपको बिँडो नेपथ्यले धानेको छ । समकालीन साथीहरु लाखपाखा लागे । गीत निकालेर रिटर्न आउँदैन । क्यासेट बिक्री हुँदैन । यस्तोमा एल्बम निकालेर के गर्नु ? हामी त निरन्तरताका लागि मात्र एल्बम निकालिरहेका छौं ।’
First published Shukrabar weekly
लामाचौरमा तीज महोत्सव शुरु
नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सवमा लोम्वा उत्कृष्ट